Wararka - Waa Maxay Faa'iidooyinka Qaadashada Kalooriyamka Vitamin C ee Chlorella?
Chlorella waa wax fiican.fitamiin chlorella cMid ahaan, waa kaabis dabiici ah, oo dhammaystiran oo badbaado leh, waxaana la tusay inay ku siiso faa'iidooyin badan oo wanaagsan caafimaadkaaga. Chlorella, oo ka timaada badda Closterium Allum, waxay ku shaqaysaa dilalka unugyada algae. Maaddaama algae uu mas'uul ka yahay sameynta qayb wanaagsan oo ka mid ah meeraheena madhalays iyo bunni, dilka ayaa macno samaynaya. Sidaa darteed, Chlorella, waa hab wax ku ool ah oo lagu hubiyo inaad ka qaadanaysid ilo nafaqo oo la isku hallayn karo isla markaasna jidhkaaga ka takhalusaysa koritaanka algae.
Sidee fitamiin C -da Chlorella u dishaa algae? Waxay sidaas samaysaa iyada oo ka hortagaysa asiidhyada dufanka ah ee uu soo saaray beerka in laga dhigo “baruur”, taas oo iyaduna dhiirri -gelin karta koritaanka algae iyo bakteeriyada. Chlorella ayaa sidoo kale ka caawisa beerka inuu ka ilaaliyo saamaynta asiidhkan dufanka ah, kaas oo laf ahaantiisa faa'ido weyn u noqon kara. Tani, iyaduna, waa wax aad u weyn tan iyo markii asiidh dufan laga heli karo cuntooyin badan. Nasiib darrose, cuntooyinka oo dhan kuma jiraan, oo markay sidaas sameeyaan, waxay inta badan ku yar yihiin qaar ka mid ah asiidhyada dufanka ee daruuriga ah.
Haddaba, sidee ayay Chlorella u kabtaa si ay uga caawiso dhibaatadan? Dheeraadku wuxuu ku shaqeeyaa isagoo jirkaaga siinaya dhammaan asiidhyada dufanka lagama maarmaanka ah ee uu u baahan yahay. Adigoo la shaqeynaya beerka si aad u yareyso isku -darka dufanka, kaalmada Chlorella waxay u shaqeysaa iyada oo kordhineysa awoodda jirkaaga si loo xakameeyo heerarka aashitada dufanka leh. Fiitamiin C -ga Chlorella wuxuu si gaar ah ugu shaqeeyaa fiitamiin gubanaya maadaama uu dufan ku milmi karo, tanina waxay ka dhigan tahay inuu si toos ah u maro socodka dhiigga oo uu gaaro halka looga baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan, taas oo ku jirta muruqyada, halkaas oo uu awoodo inuu ku boodo bilow baruur gubasho.
Kaabayaasha fitamiin C ee Chlorella waxaa loo qaadan karaa kiniin ahaan ama kaabis dareere ah. In kasta oo kaniini ka sahlan yahay, haddana waa in la ogaadaa sababta oo ah inay ku jirto qaab dareere ah, waxaa laga yaabaa inaad qaadato wax ka badan hal maalin maalin kasta haddii aad rabto inaad hesho faa'iidooyinka buuxa ee kabka. Sababtaas awgeed, dad badan ayaa doorta inay qaataan kiniinnadooda maalintii hal mar ka dibna u beddelaan kaabista dareeraha mar kasta oo ay dareemaan inay u baahan yihiin inay kordhiyaan awoodda gubidda dufanka jidhkooda. Haddii aad ka fiirsato fiitamiin C -ga Chlorella, markaa waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad ka fekerto qaadashada saliidda kalluunka oo ay weheliso kaalmadaada Chlorella, maadaama saliidda kalluunka lagu yaqaan waxtarkeeda sida gubidda dufanka ee waxtarka leh.
Iyada oo ay weheliso kaalmada Chlorella, waxaa jira waxyaabo kale oo laga yaabo inaad rabto inaad ka fikirto qaadashada si aad u sii wanaajiso caafimaadkaaga. Tusaale ahaan, ma ogtahay in shaaha cagaaran ee mega uu u shaqayn karo si loo yareeyo fursadahaaga inuu kugu dhaco sonkorowga? Tani waa sababta oo ah waxaa ku jira xaddi badan oo polyphenols, kuwaas oo ah antioxidants awood leh. Antioksidant -ka ayaa sidoo kale maqaarkaaga ka dhigi kara mid dhallinyaro ah oo caafimaad qaba iyagoo ka ilaalinaya xag -jirayaasha xorta ah inay ku dhex wareegaan jidhkaaga. Markaa, haddii aad xiisaynayso qaadashada kaabis dabiici ah si aad ula dagaallanto saameynta waxyeellada leh ee gabowga, markaa shaaha cagaaran ee mega wuxuu noqon karaa mid kugu habboon.
Ugu dambayn, ugu yaraan, Chlorella sidoo kale waa kaabis aad u weyn oo aad ka fiirsato qaadashada haddii aad ka walaacsan tahay koritaanka caaryada gurigaaga dhexdiisa. Caaryadu waxay ku kori kartaa meel kasta, xitaa dhirta aad adigu leedahay! Waa fungus dabiici ah oo ku soo baxa xaaladaha qoyan wuxuuna kuu keeni karaa dhibaatooyin caafimaad oo daran. Si kastaba ha noqotee, qaadashada Chlorella, waxaad awoodi doontaa inaad xakameyso koritaanka caaryada, taasoo u oggolaanaysa dhirtaada inay koraan oo xitaa kordhiyaan wax -soo -saarkooda. Ka sokow xakamaynta koritaanka caaryada, fitamiin C -ga Chlorella ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad ilaaliso dheelitirnaan caafimaad leh oo u dhaxaysa oksijiin iyo kaarboon laba ogsaydhka gurigaaga, sidaas awgeedna waxay ka hortagaysaa in qoyaan ku soo kordho gurigaaga. Kani waa hab wax ku ool u ah xakamaynta caaryada, taas oo macnaheedu yahay in Chlorella ay xal dabiici ah u tahay dhibaatooyinka caaryadaada, ha ahaato gurigaaga ama xafiiskaaga!
Waqtiga dhejinta: Sep-20-2021